About WTE - World Trade Exchange
World Trade Exchange (WTE) no orinasam-pivarotana fifandimbiasana lehibe indrindra eran-tany, miaraka amin'ireo mpikambana, mpikambana ao aminy, ireo manana fahazoan-dàlana ary ireo orinasan-tsambo izay manao asa any amin'ny firenena 150 mahery.
World Trade Exchange (WTE) dia mpamatsy vola lehibe an'ny serivisy turnkey banking, swap default default, varotra varotra varotra, vahaolana amin'ny varotra orinasa, vahaolana fanarenana fananana, serivisy fiarovana ny fampiasam-bola, fitantanana varotra, fifanakalozam-bola be loatra, consulting, consultation financial, sehatra vola tsy miankina, tsy misy zana-bola trosa, fifanakalozana trosa, mpanelanelana mifanohitra, sehatra fifanakalozana varotra ary serivisy mifandraika amin'izany.
World Trade Exchange (WTE) no hany fikambanan'ny mpikambana manerantany izay manampy ny fikambanana sy ny olona hahazo trosa tsy misy zana-bola amin'ny vidiny aotra, hiteraka fidiram-bola azo antoka, hivarotra ny karazan-tahiry rehetra, handoa trosa amin'ny vidiny aotra, hampiakatra 10,000% ny vola miditra , ary manaova fividianana sy fampiasam-bola hatramin'ny fihenam-bidy 90% ao anatin'ny 24 ora.
WTE Vahaolana sy turnkey vahaolana dia ampiasain'ny Banky varotra sy tsy miankina, E-Wallet ary rafitra fandoavam-bola an-tserasera, Fikambanan'ny tahiry sy fampindramam-bola, vola ampiasain'ny mpampiasa vola, orinasa mpamatsy vola, fikambanan'ny mpampindram-bola, fivarotana varotra, mpivarotra orinasa, fifanakalozana entam-barotra, fifanakalozana fananana, Fifanakalozam-bola, fifanakalozam-bola ataon'ny governemanta, mpivarotra mpanohitra, rafitra fandoavam-bola, mpamatsy vola amin'ny fandefasana vola, mpamatsy vola, andrim-bola, trano fitehirizam-bolan'ny orinasa ary orinasa kely na antonony.
Izahay dia mitondra vola miditra amina miliara dolara ho an'ny marika lehibe sy kely, manerantany. WTE mamaha ny sasany amin'ireo olana ara-bola sarotra indrindra eto an-tany.
World Trade Exchange (WTE) manome ny olona, ​​orinasa, governemanta ary andrim-panjakana maro karazana serivisy sy vokatra ilain'izy ireo manampy amin'ny fanatrarana ny tanjon'izy ireo ara-bola amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainany.
Amin'ny alàlan'ny laharan-tserananay folo - varotra orinasa, fanarenana fananana, fitantanam-bola amin'ny varotra, fifanakalozana varotra, fifanakalozana fahaiza-manao be loatra, fakan-kevitra amin'ny asa aman-draharaha, fifanakalozana trosa sy trosa, fivarotana mifanohitra, tolotra ary fifanakalozana fifanakalozana - manampy ny mpanjifanay hamaha ireo fanamby henjana indrindra mahazoany izahay tanjona ara-bola amin'ny dingana rehetra amin'ny fiainany ary mahatsapa ny tena tanjony lehibe indrindra - hatramin'ny fanombohana ka hatramin'ny orinasa Fortune 500 - ary ny asa ataontsika amin'izy ireo dia samy hafa be toa azy ireo. Manampy ny fikambanana sy ny olona izahay hamorona ny soatoavina tadiaviny.
Manampy ny mpanjifanay izahay hamerina intelo ny sandan'ny tsenan'ireo fananana tsy mahomby na miady saina, mivarotra ny karazana inventories rehetra ao anatin'ny 24 ora, mahazo trosa tsy misy zana-bola amin'ny vidiny aotra, mandoa trosa amin'ny vidiny aotra, mampitombo ny vola miditra amin'ny 1,000% amin'ny 24 ora, manaova fividianana sy fampiasam-bola hatramin'ny fihenam-bidy 90% ary mampihena ny fandaniana vola hatramin'ny 90% ao anatin'ny 30 andro.
WTE Mahazo trano, orinasa amidy, vokatra tsy amidy ary mari-pankasitrahana serivisy, fananana ketraka ary tsy mandeha amin'ny vidiny feno amin'ny mpanjifantsika.
Betsaka amin'ireo fikambanana malaza eran'izao tontolo izao any amin'ny firenena manerantany no miankina amin'ny WTE mba hanampiana azy ireo hamaha ny olan'ny asa aman-draharaha sarotra indrindra, mamaly ny filàna, mahatratra ny tanjon'ny orinasa ary hambinina bebe kokoa.
inona no azonay atao ho anao
Tsy misy ezaka, fotoana na risika ilaina avy aminao mba hahazoana valiny. WTE manao ny 100% amin'ny asa ho anao. WTE dia hanampy anao hahatratra ireto valiny manaraka ireto:
Ampitomboy ny vola miditra amin'ny 10,000 30% ao anatin'ny XNUMX andro.
Ampitomboy ny vola azonao 100X ao anatin'ny 30 andro.
Mahazoa 0% bola amin'ny zanabola mandritra ny 24 ora.
Mahazoa vola ara-bola sy manafatra ao anatin'ny 24 ora.
Makà vola amin'ny milina sy fitaovana ao anatin'ny 24 ora.
Mahazoa 0% bola amin'ny zanabola amin'ny fampandrosoana fotodrafitrasa.
Amidio ny orinasa rehetra ao anatin'ny 24 ora.
Amidio ny vokatra ao anatin'ny 24 ora.
Amidio ny trano sy trano ao anatin'ny 24 ora.
Ahenao ny fandaniana vola amin'ny 90% ao anatin'ny 30 andro.
Mialà amin'ny trosa amin'ny vidiny mavesatra ao anatin'ny 7 andro.
Mahazoa fihenam-bidy 90% amin'ny fividiananao rehetra sy ny fampiasam-bolanao.
Avereno ny fananana rehetra tsy mandeha ao anatin'ny 24 ora.
Ahodino manodidina ny 7 andro ny Orinasa mpiady.
Mahazoa famatsiana fitaovana tsy misy fetra amin'ny vidiny lafo.
Manaova doka amin'ny haino aman-jery isan-karazany amin'ny vidiny lafo.
Miasa amin'ny fahafaha-manana 100%.
Miasa amin'ny Zero Cost isan'andro.
Miasa amin'ny tombony 100%.
Manitatra na mitazona tsena ivelany.
21. Famatsiam-bola alefa an-tanindrazana.
22. Diovy ny trangan-trosa ratsy.
23. Mahazo fifanarahana vahiny ho an'ny varotra amin'ny ho avy.
24. Mitadiava loharano mividiana vidiny ambany kokoa.
25. Famerana ny vidiny sy ny fifanakalozana.
26. Mahazo miditra amin'ny tsena vaovao na sarotra.
27. Makà vola amin'ny varotra na fanampiana ara-bola handoavana ny entana ilaina.
28. Vahao ny olanao lehibe indrindra 24 ora.
29. Mamaha olana ara-bola amin'ny vidiny lafo.
30. Mahazoa trano sy sarany lafo.
31. Makà fiaramanidina amin'ny fihenam-bidy 90%.
32. Mividiana lasantsy Jet amin'ny fihenam-bidy 90%.
33. Monetize seza fiaramanidina tsy voavidy tsy misy mpandeha.
34. Makà fitaovana akora amin'ny fihenam-bidy 90%.
35. Mahazoa Diamond amin'ny vidiny lafo.
36. Mahazoa orinasa rehetra amin'ny vidiny lafo.
37. Vidio amin'ny boky feno ny tahiry be loatra nataonao.
38. Vidio ny orinasanao amin'ny vidiny mangataka ao anatin'ny 24 ora
Ny lisitr'ireo klioba eto amintsika dia mihoatra ny 7,000 indostrialy sy indostrialy SUB
Ny mpanjifa tsy miankina amin'ny orinasa manerantany indrindra manerantany - orinasa mitana $ 30 tapitrisa ka hatramin'ny $ 500 miliara - no niankina WTE hanampy azy ireo handroso bebe kokoa. Ny mpanjifanay dia misy:
Ny orinasa Boeing
Ny orinasa Kraft Heinz
Ary maro hafa.
Ny lisitr'ireo klioba eto amintsika dia mitaky indostrialy 7,000+ sy indostrialy zahana
ankamaroan'ireo fikambanana AMPIASAO WTE sehatra AS A BUSINESS EDGE / HEDGE!
Nanampy orinasa malaza hampiasa vola tsy miankina izahay amin'ny alàlan'ny WTE PLATFORM ho toy ny «sisintany / fefy» lehibe ananan'izy ireo amin'ny fifaninanana. Ny iray dia gadra hotely. Ny iray hafa dia zotram-piaramanidina. Ny iray dia tambajotram-pahitalavitra. Ny iray hafa dia orinasa fiara. Ny iray hafa dia orinasan-tsolika. Ny iray hafa dia orinasa mpamokatra vy. Ny iray hafa dia orinasam-pitaovana manerantany. Ny iray hafa dia orinasan-tsambo. Ny iray dia orinasa elektronika sy orinasa hafa an'arivony manerantany. Azontsika atao ny mahafantatra ny haavon'ny tombony azo avy amin'ny haben'ny monster izay nampidirin'ny vola tsy miankina amin'ny vola farany azon'izy ireo, ary an-jatony tapitrisa dolara izany.
WTE PLATFORM dia ampiasain'ny indostrialy 7,168 sy indostria ambanin'ny tany
Ny traikefa anananay sy ny lisitr'ireo klioba dia mitombo mihoatra ny indostrialy 7,000 sy ny indostria ambanin'ny tany.
Niara-niasa sy nanohy niasa tamin'ny sokajin'orinasa rehetra azo eritreretina izahay: banky, solika sy lasantsy, vy, vola, fiaramanidina, teknolojia, famokarana, varotra, ambongadiny, fizarana mpivarotra, fanao matihanina, orinasa mpanolotsaina, sy maro hafa.
Miaraka amin'ny fahaiza-manao manerana ny indostria sy sub-indostrialy mihoatra ny 7,000, izahay dia manolotra valim-panovana ho an'ny mpanjifanay sy ny mpikambana rehetra.
Kitiho eto ho an'ny indostrialy 7,000+ sy ny indostrialy SUB
WTEMPIARAKA MIARAKA AMIN'NY TRANO
Sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana
Union of Associations iraisam-pirenena
Fikambanana iraisam-pirenena momba ny fiarovana ara-tsaina
Ampidino ity tatitra momba ny PDF 48 pejy ity WORLD TRADE EXCHANGE